Amena! | NewsMada
Nampihivingivin-doha sy nampitampim-bava izay nahita ny sarin’ireo hoe dahalo enin-dahy maty niharan’ny fitsaram-bahoaka tao amin’ny kaominina Tsarabaria, distrikan’i Vohémar. Sary nisy nanaparitaka tao anatin’ny tambajotran-tserasera facebook, mampiseho ireo dahalo miampatrampatra, mihosin-dra,… sy ireo vato malao natontan’ny fokonolona tamin’izy ireo. Nanafika tokantrano iray sady nangalatra lavanila milanja 150 kg ny nanenjehan’ny fokonolona azy ireo. Tena « horera », araka ny fitenin-jatovo. Manaraka eo ambany eo ny fanehoan-kevitra marobe ; “mampalahelo”, “tsara ho azy izay »!, « angaha dia tsy maintsy miafara amin’izao ?”, “aiza ny mpitandro filaminana ?”…
Efa betsaka ihany izay resaka momba ity fitsaram-bahoaka ity izay. Fa mandraka ity ny androany, izao mbola mitohy tsy misy fiafarany izao ihany. Ny mahavariana aza, arakaraka ny hiresahan’ny manampahefana sy ny fitondrana momba ny fandriampahalemana sy filamimam-bahoaka no vao mainka mampirongatra ny tsy fandriampahalemana, na an-tanàn-dehibe, indrindra ny any ambanivohitra. Vao omaly ny omaly izao, ohatra, nanao atrikasa fikaonandoha, mifantoka amin’ny hoe paikady hanafainganana ny famerenana ny fandriampahalemana ny polisim-pirenena.
Mbola izay lafiny fandrindrana asa vaovao hamerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana izay ihany koa ny tari-dresaka momba ny teboka “fandriampahalemana sy filaminana”, ao anatin’ny Politika ankapoben’ny fitondrana, vao nampahafantarina teny Tsimbazaza, tsy ela akory izay… Voalaza ao anatin’izany fa hisy kaomisarian’ny polisy maromaro hatsangana. Tahaka izany koa ny fametrahana borigady sy tobim-paritry ny zandary amin’ny faritra vitsivitsy maromaro, fandraisana zandary vaovao hatrany amin’ny 1 200… Mahavelombolo tokoa raha tanteraka… ara-bakiteny izany fa tsy hijanona ho politika fotsiny ihany. Indrindra fa hoe “ao anatin’ny fotoana fohy ny hanatanterahana azy”. Ho tanteraka tokoa anie izany. Amena!!!